အီတလီဘောလုံးရဲ့ Gran Gala Del Clasico ဆုပေးပွဲမှာ ဘူဖွန် နဲ့ ဂျုဗင်တပ်အသင်းတို့ အောင်ပွဲခံ -
အီတလီဘောလုံးရဲ့ Gran Gala Del Clasico ဆုပေးပွဲမှာ ဘူဖွန် နဲ့ ဂျုဗင်တပ်အသင်းတို့ အောင်ပွဲခံ
Home/ အီတလီဘောလုံးရဲ့ Gran Gala Del Clasico ဆုပေးပွဲမှာ ဘူဖွန် နဲ့ ဂျုဗင်တပ်အသင်းတို့ အောင်ပွဲခံ
Nov 28, 2017 MMSportNews
ယမန်နေ့ညက ပြုလုပ်သွားခဲ့တဲ့ The Gran Gala del Clasico ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာတော့ စီးရီးအေ ၀ါရင့် ဂိုးသမားကြီး ဂီယန်လူဂီ ဘူဖွန် က အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိသွားခဲ့ပါတယ် ။
ဂရန်းဂါလာဆုဟာ ယမန်နှစ် ရာသီအတွင်း စီးရီးအေမှာ အကောင်းဆုံး ပုံစံပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေကို ရွေးချယ်ဆုချီးမြှင့်တဲ့ပွဲဖြစ်ပြီး အီတလီဘောလုံးရဲ့ အော်စကာဆုပေးပွဲလို့လည်း တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ် ။
တနှစ်တာအကောင်းဆုံး နည်းပြဆုကိုတော့ နာပိုလီ နည်းပြ မူရီဇီယို ဆာရီ က ဂျုဗင်တပ် နည်းပြ အယ်လီဂရီ ကို ကျော်ဖြတ်ကာ ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဆာရီကတော့ လာမယ့် သောကြာနေ့မှာ ရင်ဆိုက် ကစားမယ့် နာပိုလီ – ဂျုဗင်တပ် ပွဲအတွက် အလုပ်များနေတာကြောင့် ယခုပွဲကို မတက်ရောက်ခဲ့ဘဲ နာပိုလီ ဥက္ကဌ ဒီလော်ရန်းတစ် က ဆုကို လက်ခံရယူသွားခဲ့ပါတယ် ။
တနှစ်တာ အကောင်းဆုံးအသင်းရဲ့ ဂိုးသမားဆုကိုလည်း ဘူဖွန်ကပဲဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ် ။
အကောင်းဆုံးနောက်တန်းကစားသမားဆုတွေကိုတော့ PSG ကို ပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဂျုဗီ နောက်ခံလူ ဟောင်း ဒါနီအဲလ်ဗက် ၊ နာပိုလီ နောက်ခံလူ ကိုလူဘာလီ ၊ အေစီမီလန် ခံစစ်မှုး ဘိုနူချီ နဲ့ ဂျုဗင်တပ် နောက်ခံလူ အဲလက်စ် ဆန်ဒရို တို့က ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ကြပါတယ် ။
ကွင်းလယ်မှာအကောင်းဆုံး ပုံစံပြသနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ကစားသမားတွေအဖြစ် ရိုးမားကွင်းလယ်လူ နိုင်ဂိုလန်း ၊ နာပိုလီ အသင်းခေါင်းဆောင် ဟမ်ဆစ် နဲ့ ဂျုဗင်တပ် ကွင်းလယ်လူ ယာနစ် တို့က ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ် ။
၄-၃-၃ ကစားကွက် နဲ့ ရွေးချယ်တဲ့ အဆိုပါ ဆုပေးပွဲရဲ့ ရှေ့တန်း ကစားသမားဆုတွေကိုတော့ ဂျုဗင်တပ် တိုက်စစ် အတွဲဖြစ်တဲ့ ဟီဂူအင် ၊ ဒိုင်ဘားလား တို့ အပြင် နာပိုလီ တိုက်စစ်မှုး မာတင် တို့က ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ဆုပေးပွဲမှာ လက်ရွေးစင် ကစားသမားဘ၀နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘူဖွန်ကို မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ “အခု ကျွန်တော် တို့ ဘာလို့ ဆွီဒင် ကို ရှုံးသွားလဲ သိပီဗျ ( ရယ်လျှက် ) ။ အဘိုးကြီးက အကောင်းဆုံးဆုတွေကို ရနေတုန်းပဲလေ ။ မဟုတ်ဘူးလား” လို့ စတင် အရွှန်းဖောက်သွားခဲ့ပါတယ် ။
“ကျွန်တော် ပျော်ရွှင်ပြီး ဂုဏ်ယူမိပါတယ် ။ ဒီလို ဆုမျိုးကို ရလိမ့်မယ်လို့လည်း မမျှော်လင့်မိပါဘူး ။ ဒီဆုကို သေချာ သိမ်းထားပါ့မယ် ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော် တစ်ခါမှ လူငယ်အကောင်းဆုံးဆုဆိုပြီး မရဖူးလို့ပါ ။ အီတလီ အတွက်လား . . . . . လောလောဆယ်တော့ နားလိုက်ပါပီ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့ နေရာကို အစားထိုးမယ့်လူလည်းမရှိဘူး ၊ အီတလီကလည်း ပြန်ကစားဖို့ တောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ အသက် ၆၀ အထိ ကျွန်တော် ကစားပေးပါမယ့်ဗျာ” လို့ ဘူဖွန်ကြီးက ဟာသလုပ်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် ။
ကာဂလီယာလီ အသင်းရဲ့ ဂိုးသမား အဲလစ်ဆီယို ကရာနို ဟာ စီးရီးဘီ ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဂိုးသမားဆုကို ရရှိသွားခဲ့ပြီး ဖီအိုရင်တီးနား အမျိုးသမီး အသင်းကစားသမား အီလီယာ ဂွာနီ က တော့ တနှစ်တာအကောင်း ဆုံး အမျိုးသမီးကစားသမားဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိသွားခဲ့ပါတယ် ။
အီတလီဘောလုံးရဲ့ Gran Gala Del Clasico ဆုပေးပှဲမှာ ဘူဖှနျ နဲ့ ဂြုဗငျတပျအသငျးတို့ အောငျပှဲခံ
ယမနျနညေ့က ပွုလုပျသှားခဲ့တဲ့ The Gran Gala del Clasico ဆုပေးပှဲအခမျးအနားမှာတော့ စီးရီးအေ ၀ါရငျ့ ဂိုးသမားကွီး ဂီယနျလူဂီ ဘူဖှနျ က အကောငျးဆုံး ကစားသမားဆုကို ဆှတျခူးရရှိသှားခဲ့ပါတယျ ။
ဂရနျးဂါလာဆုဟာ ယမနျနှဈ ရာသီအတှငျး စီးရီးအမှော အကောငျးဆုံး ပုံစံပွသနိုငျခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှကေို ရှေးခယျြဆုခြီးမွှငျ့တဲ့ပှဲဖွဈပွီး အီတလီဘောလုံးရဲ့ အျောစကာဆုပေးပှဲလို့လညျး တငျစားချေါဝျေါကွပါတယျ ။
တနှဈတာအကောငျးဆုံး နညျးပွဆုကိုတော့ နာပိုလီ နညျးပွ မူရီဇီယို ဆာရီ က ဂြုဗငျတပျ နညျးပွ အယျလီဂရီ ကို ကြျောဖွတျကာ ရရှိသှားခဲ့ပါတယျ။ ဆာရီကတော့ လာမယျ့ သောကွာနမှေ့ာ ရငျဆိုကျ ကစားမယျ့ နာပိုလီ – ဂြုဗငျတပျ ပှဲအတှကျ အလုပျမြားနတောကွောငျ့ ယခုပှဲကို မတကျရောကျခဲ့ဘဲ နာပိုလီ ဥက်ကဌ ဒီလျောရနျးတဈ က ဆုကို လကျခံရယူသှားခဲ့ပါတယျ ။
တနှဈတာ အကောငျးဆုံးအသငျးရဲ့ ဂိုးသမားဆုကိုလညျး ဘူဖှနျကပဲဆှတျခူးရရှိခဲ့ပါတယျ ။
အကောငျးဆုံးနောကျတနျးကစားသမားဆုတှကေိုတော့ PSG ကို ပွောငျးရှသှေ့ားပွီဖွဈတဲ့ ဂြုဗီ နောကျခံလူ ဟောငျး ဒါနီအဲလျဗကျ ၊ နာပိုလီ နောကျခံလူ ကိုလူဘာလီ ၊ အစေီမီလနျ ခံစဈမှုး ဘိုနူခြီ နဲ့ ဂြုဗငျတပျ နောကျခံလူ အဲလကျဈ ဆနျဒရျို တို့က ဆှတျခူးရရှိခဲ့ကွပါတယျ ။
ကှငျးလယျမှာအကောငျးဆုံး ပုံစံပွသနိုငျခဲ့ကွတဲ့ ကစားသမားတှအေဖွဈ ရိုးမားကှငျးလယျလူ နိုငျဂိုလနျး ၊ နာပိုလီ အသငျးခေါငျးဆောငျ ဟမျဆဈ နဲ့ ဂြုဗငျတပျ ကှငျးလယျလူ ယာနဈ တို့က ဆှတျခူးရရှိခဲ့ပါတယျ ။
၄-၃-၃ ကစားကှကျ နဲ့ ရှေးခယျြတဲ့ အဆိုပါ ဆုပေးပှဲရဲ့ ရှတေ့နျး ကစားသမားဆုတှကေိုတော့ ဂြုဗငျတပျ တိုကျစဈ အတှဲဖွဈတဲ့ ဟီဂူအငျ ၊ ဒိုငျဘားလား တို့ အပွငျ နာပိုလီ တိုကျစဈမှုး မာတငျ တို့က ဆှတျခူးရရှိခဲ့ကွ ပါတယျ ။
ဆုပေးပှဲမှာ လကျရှေးစငျ ကစားသမားဘဝနဲ့ ပတျသကျလို့ ဘူဖှနျကို မေးမွနျးခဲ့ရာမှာ “အခု ကြှနျတျော တို့ ဘာလို့ ဆှီဒငျ ကို ရှုံးသှားလဲ သိပီဗြ ( ရယျလြှကျ ) ။ အဘိုးကွီးက အကောငျးဆုံးဆုတှကေို ရနတေုနျးပဲလေ ။ မဟုတျဘူးလား” လို့ စတငျ အရှနျးဖောကျသှားခဲ့ပါတယျ ။
“ကြှနျတျော ပြျောရှငျပွီး ဂုဏျယူမိပါတယျ ။ ဒီလို ဆုမြိုးကို ရလိမျ့မယျလို့လညျး မမြှျောလငျ့မိပါဘူး ။ ဒီဆုကို သခြော သိမျးထားပါ့မယျ ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ ကြှနျတျော တဈခါမှ လူငယျအကောငျးဆုံးဆုဆိုပွီး မရဖူးလို့ပါ ။ အီတလီ အတှကျလား . . . . . လောလောဆယျတော့ နားလိုကျပါပီ ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတော့ နရောကို အစားထိုးမယျ့လူလညျးမရှိဘူး ၊ အီတလီကလညျး ပွနျကစားဖို့ တောငျးဆိုမယျဆိုရငျတော့ အသကျ ၆၀ အထိ ကြှနျတျော ကစားပေးပါမယျ့ဗြာ” လို့ ဘူဖှနျကွီးက ဟာသလုပျပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ ။
ကာဂလီယာလီ အသငျးရဲ့ ဂိုးသမား အဲလဈဆီယို ကရာနို ဟာ စီးရီးဘီ ရဲ့ အကောငျးဆုံး ဂိုးသမားဆုကို ရရှိသှားခဲ့ပွီး ဖီအိုရငျတီးနား အမြိုးသမီး အသငျးကစားသမား အီလီယာ ဂှာနီ က တော့ တနှဈတာအကောငျး ဆုံး အမြိုးသမီးကစားသမားဆုကို ဆှတျခူးရရှိသှားခဲ့ပါတယျ ။